Qatar Airways ayaa dib u bilawday duulimaadyadeedii Riyad
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Qatar Airways ayaa dib u bilawday duulimaadyadeedii Riyad
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Qadar • Jebinta Wararka Sucuudiga • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Qatar Airways ayaa maalin walba u adeegi doonta magaalada Riyadh diyaarado waaweyn oo ay ka mid yihiin Airbus A350, Boeing 777-300 iyo Boeing 787-8
Diyaaradda Qatar Airways ayaa maanta dib u bilawday duulimaadyadii ay ku tagi jirtay magaalada Riyaad ee Boqortooyada Sacuudi Carabiya iyadoo adeeg maalinle ah la imaan jirtay. QR1164 oo ka duushay gagida diyaaradaha ee Hamad kuna sii jeeday King Khalid International Airport waxay ka duushay magaalada Doha markay ahayd 13:45 waqtiga maxaliga ah waxayna si nabad ah ku caga dhigatay meeshii loogu talagay markay ahayd 15:10. Duulimaadka waxaa waday shirkadda Qatar Airways 'Airbus A350-1000.
Dabayaaqada toddobaadkan, Qatar Airways waxay dib u bilaabi doontaa duulimaadyada Jeddah maalinta Khamiista, 14 Janaayo (QR1188 oo ka ambabaxeysa DOH 18:50) iyo Dammam Sabtida, 16 Janaayo (QR 1150 waxay ka ambabaxaysaa Doha markay tahay 17:10).
Rakaabka ka socda KSA ayaa mar kale ku raaxeysan kara abaalmarinta abaalmarinta ah ee 'Qsuite', oo ay ka muuqdaan albaabbada asturnaanta oo hoos u dhacaya iyo ikhtiyaarka ah in la isticmaalo tilmaame 'Ha Rabsan (DND). Qaab dhismeedka kursiga 'Qsuite' waa qaabeynta 1-2-1, oo rakaabka siisa mid ka mid ah waxyaabaha ugu waasacasan, ee si buuxda u gaar ah, raaxo leh, iyo waxyaabaha bulshada ka fog ee cirka.
Shirkada duulimaadka ee Qatar ayaa sii waday dib u dhiska shabakadeeda, taas oo hada taagan in ka badan 110 goobood iyada oo qorsheyneysa in ay ka badato in ka badan 125 dhamaadka bisha Maarso 2021. 'Abaalmarinta Abaalmarinta Duulimaadyada Adduunka ee 2019, oo ay maamusho Skytrax. Waa diyaaradda kaliya ee la siiyay abaalmarinta 'Skytrax Airline of the Year', oo loo aqoonsan yahay inay tahay meesha ugu sareysa ee shirkadaha diyaaradaha, shan jeer.
Hamad International Airport (HIA), hoyga iyo xarunta diyaaradda, waxaa dhowaan lagu qiimeeyay 'Madaarka Saddexaad ee Ugu Fiican Adduunka', oo ka mid ah 550 garoomo diyaaradeed oo adduunka oo dhan ah, oo ay bixiso Abaalmarinta Madaarka Caalamiga ah ee 'Skytrax World 2020'. ayaa si isdaba joog ah ugu sii kordheysay qiimeynta 'Garoomada Diyaaradaha Adduunka ugu Fiican' tan iyo bilowgii howlaheeda sanadkii 2019. Intaas waxaa sii dheer, HIA waxaa loo doortay 'garoonka ugu wanaagsan bariga dhexe' sanadkii lixaad oo xiriir ah iyo 'Adeegga Shaqaalaha ugu Fiican Bariga Dhexe 'sanadkii shanaad oo xiriir ah.